November 2013 ~ ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
7:12:00 PM software No comments
English-Myanmar dictionary လိုချင်တဲ့ ညီငယ်တယောက်က တောင်းထားလို့
ကျနော် သုံးနေတဲ့ dictionary သုံးခုလုံးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
Shweyoe Dictionary3ကို ဒီမှာယူပါ
wxPyDict - Dictionary ကို ဒီမှာယူပါ
Whizzo Dictionary ကို ဒီမှာယူပါ
7:09:00 PM software No comments
VZO version အဟောင်းတွေ သုံးရတာအဆင်မပြေတော့တဲ့ သူတွေအတွက်ပါ..။
အခု version အသစ်ကတော့ တကယ့်အလန်းလေးပါပဲ..။
7:43:00 AM photoshop, software No comments
Adobe InDesign CS5 Portable version လေးပါ..။
features တွေကို တခုခြင်းစီ အလိုက် click ပြီးလေ့လာနိုင်ပါတယ်..။
သူ့မှာပါဝင်တဲ့ features တွေကတော့
PDFCreator 1.7.2 Final
5:01:00 AM software No comments
PDF ဖိုင်လေးတွေ ဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကောင်လေးက အကူညီပေးပါလိမ့်မယ်..
သူက ကျနော်တို့ Word ဒါမှမဟုတ် Notepad နဲ့ ရေးတာတွေကို
FDF Format အဖြစ် ဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်သည်..။
သူမှာပါဝင်တဲ့ features တွေကတော့ ..
4:17:00 AM IDM, software No comments
မနေ့ကပဲ Internet Download Manager 6.18 Build 8တင်တယ်
အခု 6.18 Build9ဖြစ်နေတာတွေ့လို့ ထက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
ဒီလို IDM ကို အမြဲတမ်း up to date ဖြစ်နေဖို့ အခုကျနော်တင်ပေးထားတဲ့ အထဲမှာ patch ဖိုင်လေးကို ကွန်ပျူတာမှာ အမြဲဆောင်ထားစေချင်တယ်..။
IDM update တောင်းလာပြီဆိုရင် up date ရဲရဲသာလုပ်လိုက်ပါ..
ပြီးရင် အခုကျနော်တင်ပေးထားတဲ့ အထဲမှာ Patch ဖိုင် ၃ ခု ထည့်ပေးထားပါတယ်..
ကိုယ်နှစ်သက်တာ ရွေးပြီး patch ချိုး နိုင်ပါတယ်..
IDM patch အသုံးပြုနည်းကို ဒီပို့စ်မှာ ရေးပြထားပါတယ်..။
IDM 6.18 .build7ကစပြီး အာရုံနောက်စေတဲ့
IDM has been Registered WithaFake Serial Number Error ဖြေရှင်းနည်းကို
ကျနော်စက်မှာတော့ ဒီ version မှာ ထက်တတ်တာ မရှိတော့ပါဘူး..။
4:33:00 PM software No comments
သူကတော့ လွယ်လွယ်ပြောရရင် ဖိုင်တွေစီပေးတဲ့ software ပါ..
ကျနော်တို့ စက်ထဲမှာ ဆော့ဝဲတွေ အပါအ၀င်အ၀င် ဖိုင်တွေကို သွင်းလိုက် ထုတ်လိုက်
လုပ်ပါများရင် HD ထဲမှာနေရာယူမှုတွေ ပြန့်ကျဲပြီး စက်ရဲ့ ကျမ်းမာရေးပါထိခိုက်လာတတ်ပါတယ်..
ဒီကောင်လေးကတော့ မလိုအပ်တော့တဲ့ Registry တွေကို ဖျက်ထုတ်ပြီး လိုအပ်တာတွေကိုနေရာတကျစီပေးပါလိမ့်မယ်..။
8:49:00 AM IDM, software No comments
IDM ကအမြဲတမ်း update ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ် လို့ကျနော်ထင်တယ်..။
ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ကွန်ပျူတာသုံးစွဲသူတော်တော်များများက
Mozilla Firefox ကိုပဲ အသုံးများတယ်ဆိုရမယ်..
Mozilla Firefox ကလည်း Version တခုတည်းမှာပဲ ရပ်နေတာမဟုတ်ဘူး
သူကလည်း အမြဲတမ်း up to date လုပ်နေတယ်..။
ဒီတော့ Mozilla Firefox က up to date ဖြစ်နေတာကို IDM က ပါလိုက်ပြီး update ဖြစ်နေမှ
ကျနော်တို့ download လုပ်ရတာအဆင်ပြေမှာ ဖြစ်တယ်..။
ပြီးရင် အခုကျနော်တင်ပေးထားတဲ့ အထဲက Patch ဖိုင်၂ ခုပါတဲ့ အထဲက
ပုံပါအတိုင်းကျလာရင် အ၀ါရောင်ပြထားတဲ့ patch ကိုနှိပ်လိုက်ယုံပါပဲ..
Internet Download Manager ကလည်းFullversion ဖြစ်သွားပါပြီ..။ တကယ်လို့ update လုပ်မိလို့ keyထက်တောင်းမျိုးဖြစ်ရင်လည်း..။ patch လေးကို အခုလိုပဲ ထက်Run လိုက်ပါ..။
Easy To Install Windows 8 FromaUSB Device
8:26:00 AM Tutorial No comments
ပိုစ့်အဟောင်းလေးပါပဲ..မသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်..
USB နဲ့ windows တင်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက်ပါ..။အလွယ်ကူဆုံး အရိုးရှင်းဆုံး အမြန်ဆုံး အသုံးပြုလို့ ရတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းတခုပါ..။ကျနော်ကိုယ်တိုင် အသုံးပြုလို့ အဆင်ပြေလို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်တာပါ..။
ကျနော်တုန်းက DVD device ပျက်နေတဲ့ ကွန်ပျူတာ တလုံးအတွက် windows ကို USB Device နဲ့ တင်ဖို့ကျနော့်စက်မှာ windows7 USB DVD- tool သွင်းတာ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်..။နောက်တော့ အခုတင်လိုက်တဲ့ နည်းလမ်းအတိုင်းလုပ်တာ အဆင်ပြေသွားတယ်..။
အရင်က ဒီမှာ How To Install Windows 8 FromaUSB Device ဆိုတဲ့ပို့စ်တင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ..။
အခုနည်းလမ်းကတော့ ပိုလွယ်ပါတယ်။ စက်ထဲမှာ 7-Zip ရှိရင်ရပါပြီ..။မရှိသေးရင် ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
အရင်ဆုံး USB device ကို format ချလိုက်ပါ..။အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ USB device ပေါ် right click ပေးပြီး format ကိုရွေးလိုက်ယုံပါပဲ..။
ပြီရင် windows iso ဖိုင်ပေါ်ကို right click ပေးလိုက်ပါ..။
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း 7-zip ပေါ်ကို ကလစ်ထောက်ပြီး Extract file ကိုရွေးလိုက်ပါ..။
အ၀ါရောင်နဲ့ ပြထားတဲ့ နေရာကို click လိုက်ပြီး device ရွေးရပါမယ်..။
computer ကို click လိုက်ပါ..။
ကိုယ်အသုံးပြုမဲ့ USB device ကို ရွေးမယ် ကျနော် ကတော့ (J:) ကိုရွေးထားတယ်..။
ဒါက USB device ကို ရွေးပြီးထားတဲ့ပုံပါ..။ok လုပ်လိုက်ပါ..။
ဒါကတော့ usb device ထဲကို windows ISO ဖိုင်သွင်းနေတဲ့ပုံပါ..။
ခဏတော့ စောင့်ရပါမယ်..။ 100% ပြည့်ရင် ပြီးပါပြီ။
အခုဆိုရင် windows install လုပ်နိုင်တဲ့ USB bootable လေးတခုရပြီပေါ့ဗျာ..
4:50:00 PM Recovery, software No comments
iCare Format Recovery Pro 5.2.0.
Recovery အနေနဲ့ကတော့ format ချပြီးသား ကိုတောင် ဒီကောင်လေးက
4:44:00 PM software No comments
သူကတော့ video watermark လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဒီဇိုင်းမျိုးစုံနဲ့
Video တွေကို ပြင်ဆင်တည်ဖြတ်တာလည်း ဒီကောင်လေးနဲ့ လုပ်နိုင်ပါတယ်..
4:39:00 AM movies No comments
Watch Young Detective Dee- Rise of the Sea Dragon ဒီကားလေးကို ကြည့်ရတော့ ကျနော်မိတ်ဆွေတွေကို ကြည့်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
6:00:00 AM software No comments
5:52:00 AM Recovery, software No comments
- Hard drives/Memory devices: restore lost files from internal and external hard drives, USB, pen drives, SD card, digital camera…
- Android/Optical disks/Mobile/Media player: restore files from CD, DVD, Samsung, Motorola, Nokia, MP3, MP4 player…
- Photo/Graphic: restore images, such as JPG, JPEG, PNG, BMP…
CCleaner Professional & Bussiness Edition v4.08.4428 (25 Nov 2013)
4:24:00 PM CCleaner, software No comments
5:48:00 AM photoshop No comments
Activated version လေးပါ..။
key အတွက် ပူစရာမရှိတာမို့ ပြန်လည်မျှ ဝေလိုက်ပါတယ်..။
Death Trance2fullmovie
5:31:00 AM movies No comments
Actors: Ben Hiura Mela Lee Tak Sakaguchi
4:45:00 PM software No comments
သူကတော့ အလွယ်ကူဆုံး Video Editor တခုပါ..
ရုပ်ရှင်တွေကို ဆက်မယ် ဖြတ်မယ် ခွဲမယ် ပေါင်းမယ် စာတန်းထိုးမယ်
အစရှိသဖြင့် လုပ်ချင်တာကို လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်..။
4:36:00 PM software No comments
ကွန်ပျူတာမှာ မလိုအပ်တော့ program တွေကို ဖြုတ်တဲအခါမှာ
ကျနော်တို့အမြင်မှာတော့ ပျက်သွားပြီ ထင်ရပေမယ့်
အားလုံးမပျက်ပဲ ဟိုတစ ဒီတစ ဖိုင်တွေက ကျန်ခဲ့တတ်ပါတယ်..
နောက်ဆော့ဝဲ တခုခု install လုပ်တဲ့အခါ သူက error အမျိုးမျိုးနဲ့ဒုက္ခ ပေးနေတတ်ပါတယ်..။
ဒီTotal Uninstall Pro က အဲဒီလိုမဖြစ်အောင် အကူညီပေးပါလိမ့်မယ်..။
* Careful analysis of the existing installed programs and createalog of changes foranew installation
* Monitoring changes in the registry and file system for new installations
* A complete and thorough removal of the analyzed application or otmonitorennyh
* Display the list of installed programs and otmonitorennyh with the relevant application icons
* Organize in groups installed applications and otmonitorennyh
* Easy and fast search program to remove keyword
* Summary and detailed information about each installed application, and otmonitorennom
* Use custom settings to detect changes
* Detailed log after removing the selected program
* Stand-alone, low resource system, the agent for notification of running installation of new applications
* Export list of installed applications and otmonitorennyh inaseparate file
* Export to file or print detected changes.
VRoot 1.7.3- 1-Click Root Method mostly All Android
5:08:00 AM Root No comments
update လေးတွေ့လို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်..
Android ဖုန်းတော်တော် များများကို ဒီကောင်လေးနဲ့ Root လုပ်လို့အဆင်ပြေပါတယ်..။
Android 1.6.xx ကနေ 4.3.xx အထိ ဒီကောင်လေးနဲ့ Root လုပ်နိုင်ပါတယ်..။
Root လုပ်မဲ့ ဖုန်းကို setting ကနေ တဆင့်
Developer options ကိုဝင်ပါ..
အဲဒီကနေ USB dedugging မှာ အမှန်ခြစ်လေးပေးလိုက်ပါ..။
ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာကို USB ကြိုးနဲ့ ချိပ်လိုက်ပါ..။
install လုပ်ထားတဲ့ Vroot ကို ဖွင့်လိုက်ပါ..။
ဖုန်းနဲ့ Connected ဖြစ်ပြီဆိုရင် ညာဘက်အောက်နားက တရုပ်စာတွေထဲက
ROOT ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ...
ကွန်ပျူတာမှာ Root successful ပြ ပြီး ဖုန်း Restart ကျသွားပါလိမ့်မယ်..။
ဖုန်းကလည်း Rooted ဖြစ်သွားပါပြီ..။
Startup Faster 3.6.
6:33:00 AM software No comments
ကွန်ပျူတာကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီကောင်လေးကိုသာ
startup faster ဆိုတဲ့အတိုင်း startup ကိုမြန်ဆန်အာင် သူက ကူညီပါလိမ့်မယ်..
startup မှာမလိုအပ်တဲ့ programs တွေကို သူကပိတ်ပေးပါလိမ့်မယ်...
There’s also another common problem:
some programs leave dead links in startup groups and registries, even if the programs were uninstalled. Startup Faster! can find and remove these dead links. You can also manually remove or add any program to your startup list. With Startup Faster! you take full control.
6:12:00 AM photoshop No comments
RegCure Pro 3.1.7 Final
6:41:00 PM software No comments
သူငယ်ချင်းတယောက်က စက်ကို သိသိသာသာ ပေါ့ပါးမြန်ဆန်စေတဲ့ software ကောင်းလေးမို့
Regcure Pro Features တွေကတော့
6:30:00 PM software No comments
ကွန်ပျူတာ ကျမ်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်ဖို့ ဒီ Windows Doctor လေးကိုသာ ဆောင်ထားလိုက်ပါ..။
သူကုသနိုင်တဲ့ ကွန်ပျူတာရောဂါတွေကတော့ ...
8:23:00 AM software No comments
ကျနော်တို့ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ internet connection ကို သွက်လက်မြန်ဆန်လာအောင် ပံ့ပိုးပေးမှာပါ..။ အရင်က internet connection ပိုမြန်အောင် လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးတွက်ခဲ့တယ်..။ နောက်ပိုင်း ဒီဆော့ဝဲ သုံးကြည့်မှ သိသိသာသာမြန်လာတာကို ဂရုပြုသလို ကျနော်တို့ Download လုပ်ရင် ဘာကြောင့် IDM ကိုပိုကြိုက်သလဲ ဆိုတာပါ စဉ်းစားမိရင်း internet connection ကို ပိုမြန်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆို လက်ခံနိုင်သွားတယ်..။
ဒီကောင်လေးကတော့ ... internet connection ဘယ်လောက်မြန်အောင်ကူညီနိုင်သလဲ ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်သုံးကြည့်မှပဲ သိပါလိမ့်မယ်..
. Optimizes all internet connection types
AVG PC Tuneup 2014 14.0.1001.204 Final Full Version
8:09:00 AM software No comments
သူကတော့ အခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာ လူကြိုက်များလာတဲ့ pc tuneup software တစ်ခုပါပဲ..။
လူကြိုက်များသလောက်လည်း သူရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေက ထက်မြက်ပါတယ်..။
Configure separate settings for Windows.
နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ယူလိုက်ပါ..။
4:40:00 PM software No comments
သူကတော့ WebCam ကိုသုံးပြီး ပျော်စရာလေးတွေဖန်တီးဖို့ပါ..
သုံးကြည့်လိုက်ရင် တော့ ဘာတွေ ဖန်တီးနိုင်သလဲ သိပါလိမ့်မယ်..
သူ့ကို Full version ဖြစ်အောင်လုပ်နည်းလေးပါ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်..
အရင်ဆုံး Webcam program ကို Install ပြီးရင် မ Run ပါနဲ့...
patch ကို အရင်ကလစ်ပြီး C/ program/ webcam ကိုရွေးပေးပါ..
webcam ကိုဖွင်ပါ registerတောင်းရင် ok ကိုရွေးပေးပါ
ပြီးရင် keygen ကိုဖွင့်ပါ
အပေါ်ဆုံးက Enter code နေရာမှာ 7.7.9.6 ကိုရိုက်ပြီး အောက်ဆုံးကGenerate ကိုနှိပ်ပါ..
Enter SN ထဲကကုဒ်ကို ယူပြီး ထည့်ပေးလိုက်ပါ..
Machine data code ဆိုပြီးပေါ်လာရင် အပေါ်က ကုဒ်တွေကို ကူးပြီး
Keygen ရဲ့ အပေါ်က Enter code နေရာပါ paste လုပ်ပြီး Generater နှိပ်ပါ..
ကျလာမဲ့ Machine data code ကိုကူးပြီး register လုပ်နေတဲ့ Machine data code တောင်းတဲ့နေရာမှာ ထည့်ပေးလိုက်ပါ..။
register လုပ်နေတဲ့အချိန် Internet ကိုခဏလောက်ထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့...
4:54:00 PM photoshop, software 1 comment
သူကတော့ ကင်မရာနဲ့ ဖြစ်စေ ဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ ရိုက်ခဲ့တဲ့
အဲဒီ Video တွေကို ပြင်မယ် ဖြတ်မယ် ဆက်မယ် ပေါင်းမယ်..
အစရှိသဖြင့် Editor အမျိုးမျိုးလုပ်နိုင်ပါတယ်..။
Wondershare Video Editor makes creating movies from videos taken via mobile phone, digital camera or camcorder an easy undertaking. After launching the program, the user can choose between two aspect ratios - 16:9 and 4:3. The workspace containsafile manager,atimeline andapreview pane. Once video, image and audio files are imported, they are moved onto the timeline for editing, where the options include trim, cut, split, rotate, set fade in and out, speed and more. To addacreative touch, Wondershare Video Editor offersalarge number of effects and filters like comic or vintage styles, transitions and color corrections. Audio of the recording can be adjusted, muted or overlaid with music. Finalized movies are exported to variety of formats for portable devices or high-quality viewing, for example DVD. Online sharing is made easy with direct upload to video platforms such as YouTube.
ဒီကောင်လေးကို သုံးပြီး ကျနော်တို့ ကွန်ပျူတာကို သွက်လက်မြန်ဆန်အောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်..။
PC TuneUp Tools offers advanced PC Tuning software that is simple
to use. If your computer is running slowly, PC TuneUp Tools can bring
it back to speed in justamatter of minutes. Just install, scan and
fix. Not only does PC TuneUp Tools repair errors on your PC, it removes
junk files that just take up space and slow down your computer. Get back
that hard drive space needed to make your PC run smoothly.
The ultimate Registry Cleaner removes unwanted fragments left by
uninstalled and software products within your system’s Registry.
Free Ringtone Maker 2.4.0.1511
4:30:00 PM software No comments
သူကတော့ ဖုန်းတွေအတွက် ကိုယ်ပိုင် Ringtone လေးတွေ ဖန်တီးဖို့ပါ..။
ပုံမှာမြင်ရတဲ့ အတိုင်း သီချင်းတွေကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ နေရာကနေ ပိုင်းပြီး
ကိုယ်နှစ်သက်သလို Ringtone လေးတွေ ဖန်တီးကြည့်ပါ
အသုံးပြုနည်းက လွယ်လို့ ရေးမပြတော့ပါဘူး ..။
စိတ်ဝင်စားရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ...။
Wu Dang 2012 Full movies
6:53:00 AM movies No comments
windows7ရဲ့ starting မှာ Logon Background ကို ကိုနှစ်သက်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့
5:43:00 AM software No comments
windows 8 မှာ7တုန်းကလို gadget မပါဘူးဗျာ..။
ဒီတော့ desktop မှာတခုခုလိုနေသလိုလို ဖြစ်မနေအောင် gadget လေးထည့်ပြီး အလှဆင်ရအောင်
windows 8 for gadgets လေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်..။
CCleaner Professional & Bussiness Edition v4.08.44...
avast! Pro Antivirus 2014 full
bagan keyboard pro .2.1.1
၀င်းဒိုး ၈ Activator
How to tusfiles download
Photo Calendar Studio 2014 1.11
Office 2013 activate ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်..
Your Uninstaller.PRO 7.5
FFirefox 26.0 Beta 3
Adobe Photoshop CS6 13.1.2 Portable 32bits
samsung latest official firmware တွေကို တနေရာတည်းက...
AVG Internet Security 2014 v14.0.0.4016 (32and64-bit)
Bitdefender ချစ်သူတွေအတွက် လက်ဆောင်
windows 8 ကို ကိုယ်တိုင်တင်ကြည့်ရအောင်
ကျနော့် ဘလော့ လေးကို ဖုန်းနဲ့ အလွယ်တကူ ကြည့်ဖို့
Adobe Photoshop CS6 Full version + Patch
Windows 8 Professional x86/x64 Full Version
Driver Genius Professional v11.0.0.1112 Full Version
PhotoShine 2013 Full version
VRoot 1.7.1 - 1-Click Root Method mostly All Android
Genuine Registry Doctor 2.5 Full version